Norse Gods uye Nhema Mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Neil Gaiman, munyori weNordic Myths.
Kana tikapinda munyika dzakaita seSweden kana Norway, isu tinonzwisisa kuti yakawanda yetsika yavo yakavakirwa mungano yeNorse yakadzokera kunguva dzisati dzavapo dzechiKristu uye inoumbwa nevanhu veViking uye ngano dzinoenderera dzichipa iyo epic uye yakasarudzika mamiriro . Ngano uye ngano dzevarwi vakuru, elves uye mhuka, Valkyries uye vanamwari vane simba izvo zviri chikamu cheizvi zvinotevera Vanamwari veNorse uye mabhuku engano zvinokurudzirwa zvachose.
1 Vanamwari veNorse uye mabhuku engano
1.1 Norse ngano, naNeil Gaiman
1.2 Zvinyorwa zvengano zveEddas, naSnorri Sturluson
1.3 Celtic neNorse Mythology, naAlessandra Bartolotti
1.4 Iyo Fate yeVamwari: Dudziro yeNorse Mythology, naPatxi Lanceros
1.5 Nordic ngano, neRI Peji
1.6 Danish Nhoroondo (Zvakaipa Nguva Mabhuku), naSaxo Grammarico
1.7 Nordic Magamba: Iwo Anotungamira Gwara kune iyo Magnus Chase Universe naRick Riordan
1.8 Loki naMike Vasich
1.9 Odin's Maka: Kumutswa, naXavier Marce
Norse ngano, naNeil Gaiman
Imwe yei vanyori vakura venhau vanonakidza mabhuku yenguva yedu yakashamisa nyika yese nekuburitswa kwemubairo-inohwina graphic novel Sandman, kutora nguva yekuongorora mashiripiti edzimwe nyika senge nyika dzekuchamhembe. Vhura Nordic ngano, Gaiman anodzoreredza nyaya dzaakaverenga achiri mudiki kuti avadzorezve nekuseka uye nechido, kuda kuvakurudzira kuvabereki kuti vaverengere vana vavo. Mumapeji aro ese tinoona zvishuwo zvevamwari kana kushushikana kwavo pabonde nehondo kuburikidza nevanhu vakaita sa Thor nenyundo yake inozivikanwa, Odin kana Loki, mavara akakosha emagwaro Eddas izvo zvinoita mbiru yenyaya iyi. Yakakosha yakasarudzika.
Zvinyorwa zvengano zveEddas, naSnorri Sturluson
Yakatumirwa muna 1932, Zvinyorwa zvengano zveEddas ongorora ngano dzinonyanya kukosha dzeNorse dzeIceland nekuda kwebasa raSnorri, munyori wenhoroondo uye jurist uyo muzana ramakore rechiXNUMX akapa hupenyu kuzvinyorwa zvikuru zveanonzi mudiki Edda: Gylfaginning, zvimwe rondedzero iyo Skáldskaparmál, yehunhu uye nhetembo, uye iyo Hattatal, rondedzero yemafomu endima. Zvakaunganidzwawo zvakatorwa kubva mungano dzemadzimambo eNorway anoita zambuko pakati peyakaitika nguva uye medieval Scandinavia, kunyanya munzvimbo yeIcelandic.
Celtic neNorse Mythology, naAlessandra Bartolotti
Kunyange zvazvo vazhinji vachiita sanganisa ngano dzevaCelt nevaNorse uye vese vanobva kumwechete mabviro, vanhu veIndo-European, vaviri vacho vanosiyana mutsika dzakasiyana. MaCelt anotungamirwa nemashiripiti uye kudanana mune zvavo nyaya, nepo maNordics achikurudzira kukunda, vachirwisa chiKristu chakazopedzisa kutsika tsika mbiri. Tsika mbiri idzi dzinoongororwa naBartolotti mubhuku iri umo munyori anoongorora nyaya dzake dzinozivikanwa nekubudirira kukuru.
Ungada here kuverenga Ngano dzeCeltic neNorse?
Iyo Fate yeVamwari: Dudziro yeNorse Mythology, naPatxi Lanceros
Muzvinafundo wezvematongerwo enyika Philosophy uye Tsika Dzidziso paFakisheni yeSocial and Human Sayenzi yeYunivhesiti yeDeusto, muBilbao, Patxi Lanceros ndiye aiona nezvekuita. dudziro yekutanga yekusimbisa yenhema dzeNordic mumutauro wedu. Iri ibasa iro munyori anoburitsa hunhu uye cosmology yetsika iyo, sevamwe vazhinji vakazara Pasi munguva dzekare, vakadudzira nyika nenzira yekongiri, yakasarudzika, ichiendesa nyaya dzayo kungano dzechiGerman uye Anglo-Saxon zvakabatana iyo yenyika inotonhora yekuchamhembe.
Tsvaga Magumo evamwari.
Nordic ngano, neRI Peji
Raymond Ian Page, uyo akashaya muna 2012, aive munyori wenhoroondo weBritish akafungisisa ngano dzeNorse yaakafukunura mumabhuku akafanana neake Nordic ngano, rakaburitswa muna 1992. Kuunganidzwa kwenyaya dzinosanganisira Odin naThor, Sigurd Volsung, Freyia naLoki, Gudrun naBrynhild, protagonists yenyaya huru dzengano dzeiyi ngano yevasikana vakapfeka madhirezi akajeka, vanamwari vanoshandisa matemo uye varwi vanozununguswa mukufamba kwemabhiza anobhururuka. Ngano huru kubva kune imwe ye nyanzvi huru dzengano dzekuchamhembe XNUMXth century.
Danish Nhoroondo (Zvakaipa Nguva Mabhuku), naSaxo Grammarico
Saxo Gramatico aive wezana ramakore rechiXNUMX wechiDanish munyori wenhoroondo uyo ruzivo rwake rukuru rwunozivikanwa kuburikidza nebhuku iri. Kuongororwa kwenhoroondo yemadzimambo eDenmark kubva kunguva diki iyo munyori akaongorora nyaya dzakasiyana uye nhaurwa dzenhema dzeNorse, kunyanya kubva kuIceland. Yako zvakare Gesta Danorum, chinyorwa cheDanish nhoroondo yakanyorwa muchiLatin ayo akatorwa akasiyana akachengetedzwa ayo nhasi anoonekwa muNational Library yeDenmark uye rine vhoriyamu yechitatu inosanganisira yekutanga vhezheni yeShakespeare's Hamlet.
Lee Danish nhoroondo.
Nordic Magamba: Iwo Anotungamira Gwara kune iyo Magnus Chase Universe naRick Riordan
Riordan munyori weAmerica ane mabasa anobata batanidza Nordic ngano nezuva ranhasi kuburikidza nehunhu hwaMagnus Chase, mwana asinganzwisisike anobva kuBoston. Mavhoriyamu ane fungidziro yepasi rose akaunganidzwa muiri vhoriyamu ayo anofadza vanoda mifananidzo yemabhuku nekutenda kuunganidzwa kwezvisikwa uye mavara kubva kuNordic ngano dzinozadza iri rinokosha gwara iro rinosanganisirawo kubvunzurudzwa, anecdotes uye tsananguro dzavamwari veAsgard kana kumudzidzisa Ragnarok, iyo yekuparadzwa zuva iro rakafuridzira chazvino chikamu muDisney / Marvel Thor saga.
Ungada here kuverenga Nordic magamba?
Loki naMike Vasich
Loki aive nehanya Mwari weKunyengera, mumwe chete iyeye akatapwa navanamwari ndokuvimbisa kutsiva kwavari. Inoperekedzwa nemhumhi Fenrir, iyo inozivikanwa Midgard nyoka uye uto rehofori iro raanoda kupedza nyika pfumbamwe, Loki kuita hondo yekurwisa vavengi vake, Thor naOdin, vakaunganidza mubhuku rino rinonakidza uye rinonakidza rinoongorora nyaya dzakasiyana dzeNordic dzichitarisa pane imwe yemhando dzayo, inonyanyo kuzivikanwa nehunhu hwesori yeThor inotambwa naTom Hiddleston.
Odin's Maka: Kumutswa, naXavier Marce
Mwari wehungwaru nehondo ndiye anonyanya kukosha mungano dzeNorse uye protagonist yeichi chikamu chekutanga che a transmedia saga izvo zvinonyatso shandura nzira yekutora mimba mabhuku. Kubudikidza nekodhi inokutendera iwe kuti uwane mukana wepuratifomu, zvakasikwa zvaMarce zvinopa nyaya zvichibva pane idzi ngano uye iyi, kunyanya, inoitika kuburikidza nezviroto zvepamberi zvaLuis, mainjiniya weaerospace pane iro ramangwana rese reHunhu.
Kutanga ino inomhanya-saga saga ne Odin chiratidzo.
Ndezvipi zvaunofarira zvevamwari veNorse uye mabhuku engano?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanamwari veNorse uye mabhuku engano
Utopia - Ana Calatayud L. akadaro
Mhoro! Ini ndichangowana yako blog nemukana paBloglovin 'uye ndinofunga ndichagara pano ^ ^ Nezve ino positi, Gaiman ari iye wandinofarira munyori, «Nordic Myths» ibhuku randisingazorasikirwe ndichangowana iyo chiitiko chekuiverenga. Pamamwe ese mabhuku aunokurudzira pamisoro yeNordic, ini ndaingoziva iro raRiordan uye "The Mark of Odin" uye, kunyangwe ndisina kuverenga chero rawo, handirambidze kuzviita mune ramangwana 🙂
Kumbundira uye uuye pese paunoda: 3
Pindura Utopia - Ana Calatayud L.
Kubva kuna Miss Marple kuenda kuLisbeth Salander: Zana Remakore reVakadzi muRuzivo rwekuPara mhosva.